မြန်မာပြည်သူ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအားလုံးက လေးစားမြတ်နိုးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံအား လူမြင်ကွင်းရှေ့ မှာ ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ပြသော ငမိုက်သား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာပြည်သူ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအားလုံးက လေးစားမြတ်နိုးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံအား လူမြင်ကွင်းရှေ့ မှာ ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ပြသော ငမိုက်သား။
မြန်မာပြည်သူ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအားလုံးက လေးစားမြတ်နိုးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံအား လူမြင်ကွင်းရှေ့ မှာ ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ပြသော ငမိုက်သား။
Posted by Bayote on Jun 22, 2010 in Myanma News, News | 20 comments
မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံးက ချစ်မြတ်နိုးလေးစားရတဲ့၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအားလုံးက လေးစားဂုဏ်ပြုကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ဦးရဲ့ဓါတ်ပုံကို ခြေထောက်နဲ့လူမြင်ကွင်းရှေ့ မှာ ပေါ်တင် ခြေထောက်နဲ့ကန်ပြရဲတဲ့ နယူးယောက်မြို့ က်စစ်ဝန်ရုံး ၀န်ထမ်း ငမိုက်သားရဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို အမေရိကနအစိုးရထံ အသိပေးတိုင်ကြားကြပြီး နအဖသံတမန်တစ်ဦးရဲ့မယဉ်ကျေး မဖွယ်ရာမှုကို ထုတ်ဖေါ်ကြပါ။
ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပြည့်ဝထူးချွန်တဲ့ အရည်အချင်း၊ မြင့်မြတ်ခိုင်မြဲတဲ့ သူရသတ္တိ၊ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ လေးစားဂုဏ်ပြထိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ အတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လက်ပါးစေတွေအနေနဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီး နံ့ သာဆီနဲ့အီးပမာ ကွာခြားလွန်းတာကြောင့် ဒေါ်အော်ငဆန်းစုကြည်အပေါ် ယုတ်မာသောနည်းပေါင်းများစွာနဲ့နောက်ကွယ်ကတစ်မျိုး ဗြောင်ကြကြတစ်မျိုး တိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်လေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုပေါင်းမြောက်မြားစွာနဲ့လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါးစော်ကားကြပါတယ်။
ယုတ်မာလို့အားမရသေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် လူထုစည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဒီပဲယင်းမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်အောင် လုပ်ကြံတဲ့အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ယခုလည်း မြန်မာပြည်သူတွေ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအားလုံးက ချစ်မြတ်နိုးလေးစားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့(၆၅) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားတွေကို မတရားနေအိမ်အကျဉ်းချခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့ မွေးနေ့ ရှင်ကိုယ်စား အားလုံးက ကိုယ်ချင်းစာကြတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ နေရာဒေသအနှံ့ မှာ ကျင်းပဂုဏ်ပြုနေကြတာကို မနှာလို မရှူရက်နိုင်နေကြတဲ့ နအဖအာဏာရူးတစ်သိုက်နဲ့လက်ပါးစေ ကျွန်ပါးဝခွေးတစ်စုက သူတို့ ရဲ့ရိုင်းစိုင်းမှုတွေ ယုတ်မာမှုတွေကို မအောင့်အီးထားနိုင်လောက်အောင် ထုတ်ဖေါ်ရိုင်းစိုင်းပြပါတော့တယ်။
မြန်မာတွေထဲမှာလည်း သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝတဲ့ သူတွေများကုန်ကြပြီ။ သူနာမည်ကို သိချင်ပါတယ်။
ခွေးတောင်လူဆိုးလား လူကောင်းလား သိတယ် ။ ဒီကောင်က နှာခေါင်းသာမပါရင် ချီးစားမဲ့ကောင်မျိုး ။
ခွေးနဲ့ နှိုင်းရမှာတောင် ခွေးသိက္ခာကျတယ် ။
This is the standard of Than Shwe shown in Washington for civilised world. Daw Suu status is out of reach for these wicked guys. Recently in South Africa`s Fifa world cup gathering of world elders, againachair, empty chair was left asasymbol that world elder Daw Suu is still not able to attend this prestigious meeting. Those who want to view this empty chair should go to theelders.org.
That show his standard.
နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အမုန်းဆုံးပဲ
He was rewarded an automobile permit.
I want to know who is he and then tell him he is fool..
အရင်ဆုံး ဒီဓါတ်ပုံက အစစ်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာ အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ဖို့ လိုမယ် ထင်တယ်..
အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူဘာကြောင့် ဒီလို အပြုအမူမျိုးလုပ်ရတာလဲ?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် သူတစ်စုံတစ်ရာ နစ်နာခဲ့ဘူးလို့လား?
ဘာကြောင့် ခြေထောက်နဲ့ ကန်ချင်လောက်အောင် မုန်းတီးရတာလဲ?
အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာပြီ
လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ?
ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေက ကြိုးကိုင် ချယ်လှယ်ထားတာလဲ?
အမေးရှိရင်တော့ အဖြေရှိမယ် ထင်ပါတယ်
ဒီကောင်တွေ က လူစိတ်မှမရှိတာ .. တိရစ္ဆာန်က မွေးတဲ့ အမျိုးတွေမို့ အဲလောက် လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရက် ကို ခွေး ကျင့် ခွေး ကြံ လုပ်တာပေါ့.. ခွေး လောက်လောက် စောက် ဆင့် မရှိဘူး တဲ့ကောင်…
လှေကားခြေနင်းမှာ ပန်းစည်းနဲ့ဓါတ်ပုံချ ဆန်ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်း ထည့်ပြောသင့်တယ် ငါ့ကောင်ရ။
အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာ အသုဘရှု့လုပ်သလို လုပ်ဖို့ဘယ်ကောင်ကမြှောက်ပေးလိုက်သလည်းမသိဘူး။
a yuu twae..
a yuu.. ohn nhout ma shi tae lu moh lohdlo lote yat myo twae ko lote tae…
ခင်ဗျားတို့အ၇ူးတွေ စွပ်ပြီးယုံ ပြီး၇င် feel တွေတက်ပြမနေနဲ့
ဒီလိုပုံမျိုး Photoshop နဲ့ ၁မိနစ်အတွင်းလုပ်လို့၇တယ်
စစ်ခွေးတွေဆီက အကြွင်းအကျန် စားရတဲ့
သူတောင်းစားရုပ်နဲ့ ကောင်ပါလား။သူ့ အမေ